ဒီသတင်းပတ် English Learning: American Idioms and Expressions ကဏ္ဍမှာ Read စကားလုံးကို အခြေခံတဲ့ Read the small print, Read my lips နဲ့ Read between the lines တို့ကိုတင်ပြထားပါတယ်။
(၁) Read the small print
Read (ဖတ်ပါ)၊ the small (သေးငယ်တာ)၊ print (ပုံနှိပ်ထားတဲ့၊ ရိုက်ထားတဲ့၊ ရေးထားတဲ့စကားလုံးတွေ) ဖြစ်ပြီး စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ် စာလုံးသေးတွေနဲ့ ရေးထားတာကို ဖတ်ပါ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံး ဆင်းသက်လာတာကတော့ အထူးသဖြင့် စာချုပ်တွေ၊ ကြော်ငြာတွေက ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်စာချုပ်တွေမှာ လူတွေသဘောကျမယ့်အချက်ကို စာလုံးကြီးကြီးနဲ့ ထင်သာမြင်သာ ရေးထားပြီး လူတွေသဘောမကျမဲ့ လက်မခံချင်တဲ့ အထူးသဖြင့် ခြွင်းချက်တွေကိုတော့ အောက်နားမှာ စာလုံးသေးသေးနဲ့ ရေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် အပေါ်ကစာသားတွေပဲဖတ်ပြီး လက်မှတ်ကောက်ထိုးလိုက်မယ်ဆိုရင် အောက်မှာစာလုံးသေးသေးနဲ့ ရေးထားတဲ့ ခြွင်းချက်တွေက ကိုယ့်ကိုတုပ်နှောင်မယ့် အချက်တွေ ဖြစ်လာဖို့ ရှိပါတယ်။ စာလုံးသေးလို့ သူသူငါငါ သိပ်ဂရုမစိုက်၊ မဖတ်ကြဘဲ စိတ်ရှုပ်မခံချင်လို့ အလွယ်တကူလက်မှတ်ထိုးကြတဲ့အတွက် ဒုက္ခရောက်ရတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ Read the small print ကတော့ စာလုံးသေးသေးနဲ့ ရေးထားတာတွေကိုလည်း ဂရုစိုက်ဖတ်ဖို့မမေ့နဲ့လို့ သတိပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အီဒီယံသွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်ကလည်း သိပ်မကွာလှပါဘူး။ တခုခုကို သဘောမတူမီ အသေးစိတ်တွေကို သေသေချာချာ လေ့လာဖို့ သတိပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
My brother warned me to read the small print before signing the contract.
စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးမထိုးခင် အသေးစိတ်ကို သေသေချာချာ ဖတ်ဖို့ ကျနော့်အကိုက ကျနော်ကို သတိပေးခဲ့တယ်။
(၂) Read my lips
Read (ဖတ်ပါ)၊ my (ကျနော်၊ ကျမရဲ့ )၊ lips (နှုတ်ခမ်း) ဆိုတော့ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ကျနော်ကျမရဲ့  နှုတ်ခမ်းတွေကို ဖတ်ပါ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကလဲ နားမကြားရတဲ့ လူတွေအနေနဲ့ တဖက်က ပြောဆိုတာကို နားလည်နိုင်ဖို့ ပါးစပ်လှုပ်တာတွေကို လိုက်ဖတ်ပြီး အဓိပ္ပါယ် ကောက်ယူတဲ့အသုံးကနေ ဆင်းသက်လာတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ နေ့စဉ်ဘဝမှာတော့ ပြောတဲ့လူရဲ့  မျက်နှာကို မကြည့်ဘဲ၊ အသံပဲ နားထောင်တာထက်၊ ပြောတဲ့လူရဲ့  မျက်နှာကိုလည်းကြည့်၊ တချိန်တည်းမှာ နားလည်းထောင်ရင် သူ ဘာပြောနေလဲဆိုတာကို ကောင်းကောင်း အာရုံစိုက်နိုင်သလို၊ ကောင်းကောင်းလည်း သဘောပေါက် နားလည်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအသုံးရဲ့  အီဒီယံအဓိပ္ပါယ်က ဘာပြောနေလဲဆိုတာကို သေသေချာချာ နားထောင်ဖို့ပြောတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးကိုသမ္မတ ဟောင်း George W. Bush ရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ သမ္မတဟောင်း George H. W. Bush က ၁၉၈၈ ခုနှစ်က ထိုစဉ် ရီပတ်ဘလင်ကန် ညီလာခံမှာ သူပြောတာကို သေသေချာချာ နားထောင်ကြ ဖို့ပြောရာမှာ “Read my lips” ဆိုပြီး ပြောခဲ့ဖူးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုစဉ်က “Read my lips. No new taxes.” ဆိုပြီး သူက ကတိပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ အခြေအနေအရ အခွန်ငွေတွေကို တိုးကောက်လာတော့ သမ္မတအဖြစ် နောက်ထပ် အရွေးမခံရတော့ဘဲ သတင်းမီဒီယာတွေက သူ့ရဲ့  Read my lips ဆိုတဲ့ ပြောကြားချက်ကို ထောက်ပြပြီး ဝေဖန်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
Read my lips! I am not going to tolerate rudeness any more!
ကျနော် ပြောတာကို သေသေချာချာ နားထောင်ပါ။ ရိုင်းစိုင်းတာတွေကို ကျနော် ဆက်ပြီး သည်းမခံနိုင်တော့ဘူး။
(၃) Read between the lines
Read (ဖတ်ပါ)၊ between (ကြားမှာ)၊ the lines (စာကြောင်းတွေ) ဆိုတော့ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ စာကြောင်းတွေကြားမှာ ဖတ်ပါ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံး ဆင်းသက်လာတာကတော့ လျှို့ ဝှက်အကြောင်းအရာတွေကို စစ်အတွင်းက ကြေနန်းရိုက်ပြီး စကားဝှက်တွေနဲ့ ပို့ရာကနေ ဆင်းသက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာကြောင်းတွေက ဘာကို ဆိုလိုသလဲဆိုတာကို အနက်အဓိပ္ပါယ်ကောက်တတ်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ နေ့စဉ်အသုံးမှာတော့ ရေးထားတဲ့စာဆိုရင် တကယ့်ခံစားချက်ကို ရေးမထားပေမဲ့ စာသားအနေအထားကိုကြည့်ပြီး အခြေအနေကို ခန့်မှန်းကြည့်နိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ လူဆိုရင် အလားတူပါပဲ ပြောတဲ့စကားတွေအရ ဘာကိုဆိုလိုသလဲ။ စိတ်ရင်းက ဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတာကို အခြေအနေကို အကဲခတ်ပြီး အဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူ နိုင်တာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
Mary said her marriage is fine. However, reading between the lines I think they are having problems.
Mary ကတော့ သူ့အိမ်ထောင်ရေး အဆင်ပြေတယ်လို့ ပြောတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ အခြေအနေကို အကဲခတ်ကြည့်ရတာတော့ သူတို့ ပြဿနာတက်နေပုံရတယ်လို့ ကျနော် ထင်တယ်။
ဒီသတင်းပတ်တင်ပြပေးခဲ့တဲ့ Read စကားလုံးကိုအခြေခံတဲ့ Idiom အသုံးအနှုန်းတွေက Read the small print, Read my lips နဲ့ Read between the lines တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။